Ungazilungisa kanjani izingqinamba zeHulu ezingasebenzi? - Ungakwenza Kanjani
Izigidi ezingama-36, isiqhwaga sokusakazaHuluingenye yamapulatifomu amakhulu okusakaza emhlabeni wonke. Ngesisekelo esikhulu kangaka somsebenzisi nolwandle lokuqukethwe, kuthambekele emaphutheni nasezimbungwini.Kulesi sihloko, sixoxa ngala maphutha nokuthi ungazilungisa kanjani ngokwakho ukuze ungalindi ukwanelisa ukulangazelela kwakho konke okuqukethwe okuhle uHulu okufanele akunikeze.Ngakho-ke, ngaphandle kokulinda, ake singene kuwo.
Yimaphi ama-Common Hulu Fixes?
Amaphutha avela kakhulu ku-Hulu ngenxa yokungaxhumeki kahle kwe-inthanethi noma uma kunezinkinga ngeseva yokusakaza noma ngedivayisi okusakazwa kuyo iHulu. Ngezansi uhlu lokulungiswa ongazama ukukuxazulula.
Hlola ukuxhumeka kwe-inthanethi kwedivayisi.
Hlola ukuthi ingabe uhlelo lokusebenza lwe-Hulu lusesikhathini yini.
Bheka ukuthi ngabe i-OS yedivayisi yokusakaza isesikhathini yini
Hlola isimo sedivayisi yenethiwekhi yasekhaya.
Zama ukuqala kabusha idivayisi yokusakaza kanye nedivayisi yenethiwekhi yasekhaya
Zama ukufaka kabusha uhlelo lokusebenza lwe-Hulu.
Izinkinga ze-Hulu ezingasebenzi - Ukulungiswa Okungenzeka
1. Ikhodi yephutha le-Hulu 3 & 5
Womabili la maphutha amathathu nephutha 5 aqala lapho kukhona uhlobo oluthile lwenkinga ngokuxhumeka kwe-inthanethi kudivayisi yokusakaza. Iyavela lapho iHulu ingakwazi ukudlala okuqukethwe nama-buffers.
Indlela yokulungisa la maphutha:
Qala kabusha idivayisi yokusakaza. Zama ukukhipha ukuxhuma idivayisi yenethiwekhi yasekhaya uphinde uyixhume kabusha.
Zama ukuxhuma idivayisi yakho kunethiwekhi yasekhaya ngoxhumano olunentambo esikhundleni sokungenantambo. Ngemuva kokuthi wenze lezi zinyathelo ezimbili nephutha lisekhona, kungenzeka ukuthi iphutha liyavela ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-Hulu noma i-Operating System ingekho maduzane.
Bheka izibuyekezo futhi uqiniseke ukuthi uhlelo lokusebenza kanye ne-OS kuyabuyekezwa.
2. Lungisa ikhodi yephutha le-Hulu 16 (Ukukhishwa kwesifunda okungavumelekile)
I-Hulu inikeza kuphela insizakalo e-U.S.A. Nase-Japan. Ikhodi yephutha engu-16 iyavela lapho uHulu ethola ukuthi ifayela le- a I-VPN isetshenziselwa ukuyifinyelela. Kwesinye isikhathi okwenzekayo ukuthi abantu abavela ngaphandle kwe-USA neJapan bazama ukufinyelela eHulu ngosizo lwensizakalo yommeleli. Uma kunjalo, uHulu uthola lo msebenzi bese ephonsa ikhodi yephutha engu-16.
Kepha uma usesifundeni lapho i-Hulu itholakala khona futhi usathola leli phutha, kungenzeka ukuthi uHulu acabange ukuthi usebenzisa i-VPN kufanele ucishe izilungiselelo zommeleli.
Ungazicisha kanjani izilungiselelo zommeleli kudivayisi ye-Android:
Iya kuzilungiselelo> i-Wifi ne-inthanethi> Chofoza kusithonjana se-'Gear '> cisha izilungiselelo ze-'VPN njalo'.
Ungazicisha kanjani izilungiselelo zommeleli kudivayisi ye-iOS:
Iya kuzilungiselelo> Chofoza ku-'Wifi '> Chofoza ku-'blue circle icon'> Thola inketho ye-'HTTP proxy '> isethe' off '.
Uma noma ngemuva kokwenza lezi zinyathelo, inkinga ikhona, nazi ezinye izinyathelo ezimbalwa zokuxazulula inkinga ozozama.
Zama ukusakaza ngoxhumo oluhlukile lwe-Wifi
Zama ukusakaza ngedatha yeselula.
Uma kukhona okunye kwalokhu okubili okusebenzayo, kungenzeka ukuthi i-Wifi obukade uxhunywe kuyo ngaphambilini kumele ngabe beyisebenzisa ummeleli obala. Ungaxhumana nomhlinzeki wakho wenethiwekhi ukukulungisa.
3. Lungisa ikhodi yephutha leHulu 400
Ikhodi yephutha le-Hulu 400 ibangelwa lapho imininingwane ehlotshaniswa ne-akhawunti inenkinga ethile.Ukuxazulula le nkinga ungafaka kabusha uhlelo lokusebenza noma ususe idivayisi ku-akhawunti.
Ungayisusa kanjani idivayisi kwi-akhawunti ye-Hulu:
Ngena ngemvume ku Hulu kusuka kusiphequluli sewebhu.
Chofoza kuphrofayela yakho ezobe ikhona ngakwesokudla phezulu kwewindi, eceleni kwenketho yokusesha bese uchofoza ku-'Akhawunti '. Manje chofoza ku-'Phatha amadivayisi '.
Ngemuva kokuchofoza ukuphatha amadivayisi, uzothola uhlu lwamadivayisi akwazi ukufinyelela ku-Hulu, kulolu hlu, thola idivayisi ethola ikhodi yephutha engu-400.
Chofoza inketho ethi 'Susa' ezoba phambi kwegama ledivayisi.
Lokhu kufanele kuxazulule ikhodi yephutha 400.
4. Lungisa ikhodi yephutha leHulu 500
Iphutha elingu-500 le-Hulu yinkinga ehlobene nesiphakeli. Leli phutha libangelwa kakhulu ngenkathi usebenzisa iwebhusayithi ye-Hulu kepha amathuba ukuthi ungabona leli phutha noma ngabe ukuso isicelo sabo.
Akukho okuncane ongakwenza ukulungisa leli phutha kusuka ekugcineni kwakho. Konke ongazama ukukusebenzisa iwebhusayithi kusuka kusiphequluli sewebhu esihlukile noma kudivayisi ehlukile yokusakaza.Kuphakanyiswa futhi ukuthi ubheke ukuxhumeka kwakho kwe-inthanethi uma leli phutha livela.
5. Lungisa ikhodi yephutha leHulu 5003
Iphutha 5003 le-Hulu yinkinga ehlobene nokudlala kabusha. Leli phutha liyavela lapho kunenkinga ngohlelo lokusebenza lwe-Hulu noma ngedivayisi yokusakaza.
Buyekeza uhlelo lwe-Hulu
Faka kabusha isicelo se-Hulu
Bheka izibuyekezo ze-OS zedivayisi yokusakaza bese uyigcina ivuselelwa.
6. Lungisa amaphutha wokuqukethwe avikelwe uHulu
Amakhodi amaphutha ahlotshaniswa nokuvikelwa kokuqukethwe ku-Hulu athi ‘3307, 3321, 3343, 3336, 0326, 3322, 2203.’Amaphutha wokuqukethwe avikelwe abangelwa lapho umsebenzisi azama ukubuka okuqukethwe okuvikelwe kusuka kudivayisi engasekelwa.
Xhuma ikhebula le-HDMI kusiqapha sakho. Qiniseka ukuthi akuyona ikhebula le-VGA.
Uma kwenzeka unokusetha kwama-multi-monitor. Khipha imonitha yesibili.
Buyekeza i-Web browser yakho.
Qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho ayikho kumodi yokulala.
7. Lungisa amaphutha weHulu HDCP
I-HDCP isichazamazwi se-High-bandwidth Digital Content Protection. Iphutha le-HDCP lingacushwa uma usebenzisa isibonisi okungukuthi imonitha noma isethi yethelevishini esiphelelwe yisikhathi futhi engakwazi ukuxhumana nedivayisi ebuyekeziwe. Kungabangelwa futhi uma kunenkinga ehlobene nezintambo ze-HDMI.
Izindlela zokulungisa amaphutha we-HDCP:
Susa ikhebula le-HDMI kuzo zombili izinto ezisakazwayo kanye nesibonisi
Vala ngokuphelele amadivayisi womabili
Phinda uxhume ikhebuli ye-HDMI kuwo womabili amadivayisi
Qala kabusha idivayisi yokusakaza ne-Display
8. Ukukhishwa kwephutha neHulu Code BYA-403-007
Amaphutha we-Hulu BYA ahlobene nezinkinga zokudlala. Lawa maphutha angumphumela wezinkinga ezivela ekugcineni kukaHulu.Ukuze uhlolisise leli phutha, zama ukubuka okuqukethwe okwehlukile ku-Hulu, uma okunye okuqukethwe kungadlalwa ngakho-ke kuwuphawu lokuthi amaseva we-Hulu ahlangabezana nokuphelelwa ngamandla okuthinta okunye okuqukethwe.Uma konke okuqukethwe kungadlaleki, kuzofanela ulinde uHulu ukuthi alungise ukuphela kwabo ekugcineni.
1Q. Ngimvuselela kanjani uHulu ku-My smart TV?
Iminyaka:Ngomhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo wokuvuselela i-Hulu kunoma yiluphi uhlobo lwe-smart TV. ukuvakasha lapha
2Q. Ngingakwazi ukufinyelela eHulu uma ngihamba ezifundeni lapho zingatholakali khona?
Iminyaka:CHA, awukwazi ukufinyelela i-Hulu ezifundeni lapho ingatholakali khona noma ngabe uyisakhamuzi saseMelika noma saseJapan. Udinga ukuba kula mazwe womabili.
3Q. Ukuhlola kuphi ukuhambisana kwedivayisi?
Iminyaka:Ungahlola ukuthi ingabe idivayisi yakho iyahambisana ne-Hulu noma cha lapha
4Q. Kubiza malini uHulu?
Iminyaka:Izinhlelo zeHulu ziqala kusuka ku-5.99 USD kuya ku-54.99 USD. Ungafunda kabanzi ngamanani abo ngokuchofoza lapha.
Njengoba i-BIg iyisevisi yokusakaza, uhlu lwamaphutha enalo aluluncane futhi. Kepha unesiqondisi sethu sesinyathelo ngesinyathelo ukukusiza nganoma yiluphi uhlobo lwephutha uHulu akuliphonsa kuwe. Ukulandela umhlahlandlela wethu ngokufanele kuzokusiza ukuthi ulungise izingqinamba ngokushesha, ungakujabulela okuqukethwe kwakho okuthandayo ngaphandle kokuthi ulinde omunye umuntu ukuthi eze ukuzolungisa izinkinga zakho.
Ama-50 Abesifazane Abaziwa Kakhulu Emhlabeni (Uhlu lwe-2020)
Imibono Yezifanekiso ZeRoblox Shirt (2020) - Manje Dala Ihembe Lakho
Ngabe sisekhona okwamanje ama-putlockers agcwele ama-movie
bukela i-movie yakamuva ye-hollywood online
imidlalo engcono kakhulu engavinjelwe esikoleni
guqula noma iyiphi ividiyo ye-youtube ibe yi-mp3
hulu plus ngemvume i-akhawunti yami